Binance NFT Suuqa: Uruurinta Andy Warhol, Salvador Dalì - Cazoo
Binance NFT Suuqa: Uruurinta Andy Warhol, Salvador Dalì
Bogga ugu weyn » Bogga ugu weyn » Binance NFT Suuqa: Uruurinta Andy Warhol, Salvador Dalì
Tag: NFT, Astaamo aan fungible ahayn
ah NFT (Tokens aan Fungible) adduun wey qabsadeen. Ilaa aad ku nooshahay god, halkaasoo wifi aad u xun yahay, waxaad horey u maqashay fasalkan cusub ee soo ifbaxaya ee hantida dijitaalka ah.
Isweydaarsiga Binance (halkan ku xir iyaga si aad u qorto la dhimis guddiga! - sidee u shaqeeyaa qiime dhimista?) ayaa bilaabaya suuqeeda sumcadda aan la jecleynin maanta, Khamiista 24 Juun, iyada oo xaraash qaali ah lagu soo bandhigi doono NFTyada laba shaqo oo farshaxan ah oo ay leeyihiin Andy Warhol iyo Salvador Dali.
Andy Warhol Saddex Sawir gacmeed Binance NFT
Xaraashka oo cinwaan looga dhigay "Bilowgii", ayaa lagu soo bandhigayaa NFT ka kooban "Saddex Is-Sawir" oo Andy Warhol ah, iyo sidoo kale NFT cusub oo lambar digital ah oo loo yaqaan "Salvador Dali" "Divine Comedy: rebeget". Sida lagu sheegay war-saxaafadeed, dulucda xaraashka ayaa looga golleeyahay in lagu daah furo "mawjad cusub oo Renaissance ah oo leh NFT".
Tikniyoolajiyadda NFT waxay weligood isbeddeleen farshaxanka adduunka, keenaya fikradda lahaanshaha dhijitaalka ah lahaanshaha nolosha oo dhan markii ugu horeysay ”, ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka. Xaraashka “Bilowgii” ayaa matalaya fikraddan oo xambaarsan laba qaybood oo qiimo leh oo matalaya xilliyadii 'dabaysha isbeddelka' taariikhda ”.
Xaraashka ayaa sidoo kale soo bandhigi doona kii ugu horreeyay "Sanduuqa Sirta”Binance NFT, waa hab cusub oo dadka isticmaala ay ku heli karaan NFT gaar ah. Sanduuq kasta waxaa loo ballan qaadayaa inuu hayo NFT, waxyaabaha ku jirana way ku kala duwanaan karaan naadir. Ururinta ugu horreysa ee Mystery Box waxay ka koobnaan doontaa 16 jilayaal "tokidoki" ah, alaabta carruurtu ku ciyaarto oo lagu dhiirrigeliyey qaab nololeedka Jabaan, oo ay abuurtay 2006 farshaxamiiste Talyaani ah Simone Legno.
Xaraashka ayaa ka mid ah barnaamijka dhawaan la shaaciyay ee Binance ee “100 Abuurayaal”, oo ay ku jiraan 100 farshaxanno oo loo xushay inay hoggaamiyaan bilaabista suuqa NFT. Kaliya abuurayaashan la xushay ayaa awoodi doona inay iibiyaan farshaxanadooda usbuuca ugu horeeya kadib marka suuqa la furo.
Binance waxay ku dhawaaqday inay bilaabayaan suuq loogu talagalay abuurka NFT iyo ganacsiga dhammaadkii bishii Abriil ee sannadkan, iyagoo ugu yeeray "tallaabo istiraatiiji ah" si loo sii wado ballanqaadkeeda ku aaddan tikniyoolajiyadda NFT.
Waxaan higsaneynaa inaan dhisno madasha ganacsiga NFT ee ugu weyn adduunka kabaallaynta xalalka NFT ee ugu dhakhsaha badan, ugu raqiisan uguna amniga badan ee ku shaqeeya kaabayaasha xannibaadda iyo bulshada Binance, ”afhayeen u hadlay shirkadda ayaa u sheegay The Block.
Dhammaan shaqooyinka liiska ku qoran waxaa laga heli karaa Suuqa Binance NFT.
Waxa dad badani isweydiinayaan ayaa ah in bilaabitaankani saameyn ku yeelan doono astaamaha asalka ah ee Binance, the BNB. Xamaasadda ka dambeysa daahfurkaan miyuu kordhin doonaa qiimaha calaamaddan?
Iibso QIIMAHA BNB EE BANNAANKA
Maqaalka horeSidee Sorare u shaqeysaa, kubada cagta adduunka ee khiyaaliga ah ee ka socota Ethereum
Maqaalka xigtaWarbixinta NFT: 2021 waa sanad kobac weyn